ရှညောသား: July 2018
အခုဒီဟင်းကိုလည်းဘေးအခန်းကစိုက်ပျိုးရေးဌာနကအစ်ကိုတစ်ယောက်ကိုပေးစားတော့ အညာသားလက်ရာကိုသဘောကျသွားတယ်။နောက်ဈေးမှာကြောင်လျှာသီးတွေ့ရင်သူဝယ်ခဲ့မယ် ချက်ကျွေးပါအုံးတဲ့း) ဒါတင်မကသေးဘူးမြန်မာပြည်အလည်ပြန်တုန်းချက်စားဖို့ ချက်နည်းပါတခါတည်းမေးသွားတယ်။ ဟင်းချက်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်စားလို့ကောင်းမှ သူများလည်းစားကောင်းမယ်လို့မှတ်ယူပြီးချက်တာမို့လားမသိဘူး စားဖူးသူတော်တော်များများကတော့
နောက်တခါတမ်းတကြတာများတယ်း)ကြုံတုန်းကြွားတာပါး)
ကြောင်လျှာသီးကြော်နည်းကတော့ - ကြောင်လျှာသီးကိုလက်တလုံးခန့်အရွယ်လှီးပြီးဆားနည်းနည်းနဲ့ပျော့အောင်နယ်ထား
ခါးစပ်စပ်အရသာလေးနဲ့ထမင်းမြိန်စေတဲ့ အညာသားလက်ရာ ကြောင်လျှာသီးငါးခြောက်ချက်
ဒါက အဆောင်အောက်က သဘောင်္သီးထောင်းဆိုင်က ဝယ်စားတာ အဲ့ဒီနေ့က နှာစေးခေါင်းကိုက်နေလို့ ငရုတ်သီးစပ်စပ်မှာလိုက်တာ တဝက်ကျအောင်မနည်းစားရတယ် စပ်လည်းစပ် စားလို့လည်းကောင်း မုန့်ဟင်းခါးဖတ်နဲ့တွဲစား ရေနွေးပါသောက်တော့ တကိုယ်လုံးချွေးတွေထွက်ပြီး နှာစေးတာရော ခေါင်းကိုက်တာရောပျောက် ငရုတ်သီးစပ်တာက ဗိုက်တွေပါအောင့်တယ်း)
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, July 28, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဇူလိုင်လ ပထမပတ်ထဲက ပတ္တရား ကမ်းခြေမှာ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ကွန်ဖရင့် ကို ဌာနကဆရာဆရာမ
Jelly Fish သောင်တင်နေတာ ခြေထောက်နဲ့သွားတို့တော့သူငယ်ချင်းတွေကသတိပေးမယ် မလုပ်နဲ့တဲ့ အဆိပ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ ကြားဖူးပေမဲ့အနီးကပ်မမြင်ဖူးတော့တို့ကြည့်တား)
ဒီအသက်အရွယ်အထိ မြန်မာပြည်က ကမ်းခြေတွေကို တစ်ခေါက်မှမရောက်ဖူးသေးတဲ့ ကျနော့်အတွက်တော့ အရင်ကကြားဖူးခဲ့တဲ့ ပတ္တရားကမ်းခြေကို မမျှော်လင့်ဘဲကိုယ်တိုင်ရောက်တဲ့အခါ
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, July 21, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook